Igbo, John: Lesson 073 - Nke mkpọlite Lazaros (Jọn 11:34-44) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 073 (The raising of Lazarus)
34 O we si, Òle ebe unu tọb͕ọrọ Ya? Ha si Ya, Onye-nwe-ayi, Bia, le kwa. 35. Jizos akwa
Jizọs azaghị okwu. Mkparịta ụka na onye na-eru uju abaghị uru. N'oge a, omume dị irè karịa okwu. Ọ gwara ndị nọ ya ka ha duru ya gaa n'ili. Ha we si, Bia, le. Ndị a bụ okwu ndị ahụ Jizọs ji kpọọ ndị na-eso ụzọ ya n'oge mmalite nke ozi ya. Ọ kpọrọ ha ka ha lee ndụ; ndị a na-akpọ ya ka ọ na-ele ọnwụ anya. Ya mere, ọ kwara ákwá mgbe ọ hụrụ na ha enweghị nghọta, nghọta ha na enweghị ike ikwere. Ọbụna ndị na-eso ụzọ ya kacha mma enweghị ike igosipụta ezigbo okwukwe. Anụ ahụ anaghị aba uru, mkpụrụ obi enweghị okwukwe. A wụpụghị Mmụọ Nsọ na ha. Ọnwụ ime mmụọ bụ eze, Ọkpara Chineke pụkwara ịkwa ákwá mgbe ụwa dara ogbenye. Jizọs bụ ezigbo nwoke, na-aṅụrị ọṅụ na ndị na-aṅụrị ọṅụ ma na-akwa ákwá n'etiti ndị na-akwa ákwá. Mmụọ ya nwere nsogbu. Ya mwute mkpụrụ obi kpaliri ịhụ ụjọ ọnwụ na-eso ụzọ ya na ha enweghị ịhụnanya maka Chineke dị ndụ. Jesus taa ebe ákwá na ala nke chọọchị anyị na anyị onwe anyị na ndị niile na-anọgide na-mmehie na na ime mmụọ ọnwụ.
36 Ya mere ndi-Ju siri, Le otú O si hu Ya n'anya. 37 Ma ufọdu nime ha siri, Nwoke a, nke meghere anya onye kpuru ìsì, ọ pughi ime ka nwoke a ghara inwu? 38a ya mere Jizos, ọzọ na-asụ ude n'ime onwe ya, …
Ndị Juu hụrụ anya mmiri Jizọs ma kọwaa ha n'ihi ịhụnanya o nwere maka Lazarọs. Ịhụnanya abụghị ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụ ọgụgụ isi, kama ọ na-ejikọta mmetụta nke mkpụrụ obi ndị ọzọ. Ịhụnanya Kraịst karịrị nghọta anyị ma gbasaa ọnwụ. Ọ hụrụ Lazarọs n'ili ya e wusiri ike ma nwee mwute mgbe ọ nwụsịrị enyi ya. Ma n'obi ya gafere nkume ahụ ma kwadebe ozu ahụ ka ọ nụ oku ya.
Ụfọdụ n'ime ndị ahụ nọ na-akatọ Jizọs maka ụzọ ndị ya jọrọ njọ ma kwurịta ya. Mgbe ahụ, iwe were Jizọs. N'ihi enweghị okwukwe na ịhụnanya na enweghị olileanya na-akpata iwe Chineke. Jizọs zubere ka a zọpụta anyị na ọchịchịrị ma zọpụta anyị site na mbara ala anyị dị warara ka anyị wee jidesie ịhụnanya ya ike ma bie ndụ site n'okwukwe ya wee nwee obi ike na olileanya ya, ịghara ịlaghachi n'ụkpụrụ mmadụ, ma tụkwasị obi n'ikike ya. Ọ na-achọ ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ na mmehie nke gburugburu anyị. Obi ọ na-esiri Jizọs ike na gị enweghị okwukwe ma ọ bụ na ọ na-aṅụrị ọṅụ n'ihi ịhụnanya siri ike i nwere?
EKPERE: Gbaghara m, Onyenwe anyị Jizọs, n'ihi na egbughị ohere iji tụkwasị obi na ịhụnanya. Gbaghara m enweghị okwukwe ma gbaghara m ọdịmma onwe m. Mee m ka m nwee olileanya dị ndụ, ịkwanyere gị ùgwù ma na-enye gị oge niile.
Gịnị mere e ji Jizos nsogbu na ihe mere o ji na-akwa ákwá?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:23 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)